Baiboly : feno 45 taona ny FMMB | NewsMada
Baiboly : feno 45 taona ny FMMB
Mankalaza ny faha-45 taona nijoroany ny Fikambanan’ny mpiara mamaly ny Baiboly (FMMB) etsy Antaninarenina. Hisy hetsika maro hotanterahina entina hanamarihana izany taon-jobily izany.
Fikambanana iraisam-pirenena ny FMMB. Nanomboka nijoro eto Madagasikara ity fikambanana ity tamin’ny traona 1971. Tany Pays de Galles/ Grande-Bretagne no niforonany tamin’ny taona 1867. Tsy fiangonana izy fa miara-miasa kosa amin’ny fiangonana kristiana rehetra.
Anisan’ny antom-pisiany ny hitaona ny olon-drehetra ho tia, hamaky ary hiaina ny Soratra Masina sy hanambara ny Vaovao mahafalin’i Jesoa Kristy.
Efa miparitaka amin’ny faritra sy tanàna 50 mahery manerana ny Nosy ny FMMB. Fantatra indrindra koa izy amin’ny alalan’ilay fandaharana “Mana isan’andro” izay mandeha amin’ny fampielezam-peo mahatratra 30 manerana ny Nosy.
Miasa amin’ny alalan’ny sehatr’asa efatra ny fikambanana. Voakasik’izany ny ankizy, tanora, mpivady sy ankohonana ary fampianarana ara-tSoratra Masina. Hatao amin’ny alalan’ny fanofanana, lasy, fanabeazana an-tsekoly, fanaparitahana literatiora kristiana, fampianarana any amin’ny fampielezam-peo, hira sy artistika, fanarenana ny ankohonana sahirana, sekoly ho an’ny sahirana … izany fomba fiasa izany.
BMikasika ny fanatontoloana izay mampirongatra ny fampiasana Baiboly amin’ny alalan’ny finday, nilaza ny filoha nasionalin’ny FMMB Rakotolehibe Mamy fa mbola hafa ny fampiasana ny tena Baiboly. Raha vaky Baiboly an-tselika dia ilaina ny finday fa raha tena handalina ny Baiboly kosa, ny boky ihany no tena tsara.
Ireo hetsika atrehina
Maro ireo hetsika hotanterahina manerana an’i Madagasikara, mandritra ny fanamarihana ny faha-45 taona, anisan’izany ny fotoam-pivavahana fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny asabotsy 30 janoary izao amin’ny 3 ora sy sasany ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana.
Ny 16 ka hatramin’ny19 marsa eny Mandriambero ny fivoriana nasionaly fandrindrana ny asa. Ny 4 ka hatramin’ny12 avrily kosa ny fitsidihana sy fanofanan’ny talen’ny FMMB avy any Angletera. Hotanterahina ny 20 ka hatramin’ny 24 septambra ny sekoly be any Mahajanga. Ny 7 ka hatramin’ny12 novambra ny “herinandron’ny FMMB” izay hatao any Toliary. Fiaraha-misakafom-pirahalahiana eto Antananrivo kosa ny alahady 27 novambra 2016.